Aamir Khan Wiilkiisa Junaid Oo Filim Jilista Kusoo Biiri Doono | Filimside –
Aamir Khan Wiilkiisa Junaid Oo Filim Jilista Kusoo Biiri Doono
Aug 10, 2017 - 2 Jawaabood
Junaid waxaa aabo u ah Super Star-ka ugu caqliga badan fanka Hindiya qof kale ma ahan waa Aamir Khan wuxuuna heestaa aabo wadada saxda ah ee Bollywood-ka ku hagi karo.
Aamir Khan horey wuxuu u sheegay inuu caruurtiisa ku taageeri doono go’aan walbo oo ku aadan mustaqbalka mihnada ay qabanayaan haatana wuxuu diyaar u yahay wiilkiisa Junaid inuu ka caawiyo sidii uu Bollywood-ka kusoo gali lahaa.
Junaid Khan marka kowaad shaqo wuxuu ka bilaabi doonaa inuu sameeyo ruwaayadaha tiyaatarada laga daawado asigoo sameyn doono ruwaayada Mother Courage and Her Children oo 19-ka bishan la bilaabi doono.
Junaid ma doonayo inuu magaca aabihiis ku meel maro wuxuuna u galay tijaabo bandhig ahaaneed marka loo qaadanayay sameynta ruwaayadaan.
Junaid wuxuu rabaa marka kowaad inuu masraxyada ruwaayadaha kusoo saaro kadib uu sidaas Bollywood-ka kusoo galo xirfad ahaan ee ma doonayo inuu si toos ah kusoo galo fanka Hindiya asigoo magaca aabihiis adeegsanayo.
Waxaa Aqriyay: 1,683
www junaid soo dhawow awoodada ku tasho waan ku tageersanhy guul wacan
mr kash says:
Aabahaa haduu wax ku qaban magaciisa aaa ku meelmareesaa marka kor iyo hoos waa wiilka amir khan ku magac heleesaaa